၅ မိနစ်အတွင်း ဟာကွက်မရှိ ဖက်ရှင်ကျသွားအောင် ဘယ်လိုဝတ်ကြမလဲ? - For her Myanmar
အိပ်ရာထ နောက်ကျလည်း ဖက်ရှင်ကိုတော့ အလျှော့ပေးလို့မရဘူးလေ 😛
မနက် ၈:၁၀ မိနစ် နှိုးစက်ပေးထားရင် ၈:၃၀ မှနိုးတဲ့ ယောင်းလေးတွေ လက်ညှိုးထောင်။ အဲဒီလို အိပ်ရာ နိုးတာနောက်ကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေ အားလုံးက နောက်ကျခြင်းမလှ နောက်ကျရေတာက ပုံမှန်.. အရင်တုန်းက ကျောင်းဆိုတော့ နောက်ကျလည်း မသကာအတန်းပျက်ရုံလောက်ပဲဆိုပေမဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမယ် နောက်ကျတဲ့အခါ အဖြတ်ခံရတာနဲ့ ကိုယ့်တစ်လစာလုံး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းကုန်မှာက စိုးရသေး…
အိပ်ရာထ နောက်ကျရပါတယ် ဆိုမှ အလှပြင်ရတာနဲ့ ဖက်ရှင်ကိုကလည်း အလျှော့မပေးချင်သေးတော့ တိုင်တွေ ပတ်ကုန်ရတာလည်း နေ့တိုင်းနီးပါးပါပဲရှန် 😛 အထူးသဖြင့် အဝတ်အစားလဲတဲ့အချိန် ဘာဝတ်ရမလဲလို့ ရွေးရတာက အလုပ်တစ်လုပ်ဆိုတော့ တကယ့်နောက်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာ ဖက်ရှင်ကျအောင် ဘယ်လိုရွေးချယ်ဝတ်စားမလဲဆိုတာကို ပုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်… အဲ့အတိုင်းတိတိကျကျ ဝတ်စရာမလိုဘူးနော်။ ဒီအတိုင်း မျက်လုံးထဲမြင်ထားတော့ အရမ်းကြီးရွေးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့..
သွားခါနီးလာခါနီး အဝတ်အစားရွေးတော့မယ်ဆိုရင် အဓိအရေးကြီးဆုံး အချက်က အတွေးမလွန်ဖို့ပါပဲ။ ကိုယ့်အဝတ်အစားက အရမ်းရိုးရှင်းလွန်းနေရင်လည်း တခြားဦးထုပ်၊ ခါးပတ်၊ လက်ဝတ်လက်စား စတာတွေကို ဖြည့်ပြီးဝတ်လို့ရတာမို့ အဝတ်အစားကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ကိုယ်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ကပဲ အရေးကြီးဆုံးပါနော်။
(၁) အမည်းရောင်ပြောင်ရှပ်၊ အဆင်ပါတဲ့ဒူးအောက်စကပ်နဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်က တည်ငြိမ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသွင်ကိုဆောင်ပေးပါတယ်။
(၂) တီရှပ်အဖြူ၊ ဘောင်းဘီအမည်းရောင် ကိုအောက်က စနီကာအဖြူလေးနဲ့တွဲဝတ်ရင်တော့ လူငယ်ဆန်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့အသွင်ကို ရရှိစေမှာပါ။ (အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာတော့ အပေါ်ကဆွယ်တာလေး တစ်ထပ်ထပ်ပေးပေါ့နော်။)
Related Article >>> အလွှာအထပ်ဖက်ရှင် (Ruffles) တွေက ၂၀၁၉ ရဲ့ဖက်ရှင်ပြယုဂ် ဖြစ်လာမှာလား?
(၃) ရှပ်တစ်ထည်ကို ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့တွဲပြီး မြင်းမြီးဆံပင်လေး (Ponytail) စည်းလိုက်ရင်လည်း ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ အသွင်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
(၄) ဘောင်းဘီဘာညာ မဝတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ဆက်တည်းဂါဝန်ကို အပေါ်ကဂျင်းကုတ်လေးထပ်ပြီး အောက်မှာ ကြိုးသိုင်းခဲတံဒေါက်ကလေးစီးလိုက်ရင်တော့ အဇမ်းတွေ ဂေါ်နိုင်ပြီပေါ့..
(၅) ဒါမှမဟုတ် ဘလောက်စ်အင်္ကျီလေးကို စတိုင်ဘောင်းဘီလေးထဲထည့်ပြီး အောက်က ဖိနပ်အပိတ်ကို အဆင်လေးနဲ့ တွဲဝတ်ရင်လည်း လှပါတယ်။
(၆) တီရှပ်အမည်း၊ ဘောင်းဘီအမည်း တစ်ကိုယ်လုံးအမည်းကို bomber jacket (မိုးကာသားနဲ့ဂျက်ကတ်) နဲ့တွဲဝတ်ရင်လည်း စတိုင်ကျပါသေးတယ် ယောင်းတို့ရေ…
(၇) အကွက်ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖလန်ထည်ကို ဂျင်းနဲ့တွဲဝတ်ပြီး ခါးပတ်အညိုလေးနဲ့တွဲရင်လည်း လှပ။
(၈) အကယ်၍ ယောင်းဆီမှာ ဂါဝန်အရှည်ကြီးဝတ်ထားတဲ့ အခါမျိုးဆို ဂါဝန်ကို ဖိနပ်ခပ်ပါးပါးလေးနဲ့ တွဲပြီး ကောက်ဝတ်ချသွားလိုက်ပါ။ လွင့်လွင့်လေးနဲ့ လှသွားပါလိမ့်မယ်။
(၉) ချည်သားဂါဝန်လေးကို အောက်ကစနီကာအဖြူနဲ့တွဲရင်လည်း ချစ်စရာအသွင်လေးကို ရရှိစေမှာပါ။
အဆင်ပြေသွားပြီလားယောင်းလေး? နှင်းကတော့ အလွယ်တကာ့ အလွယ်တွေထဲမှာမှ အလွယ်ဆုံးဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးတွေကို ရွေးထုတ်ပေးထားတာပါ။ ပြီးတော့ ဒီအဝတ်လေးတွေကလည်း ယောင်းတို့ဆီမှာ တော်တော်များများရှိလောက်တာမို့ အထူးတလည်လည်း ရှာနေစရာမလိုတော့ဘူးလေနော်။ အိပ်ရာထနောက်ကျလည်း ဖက်ရှင်ကျကျနဲ့ စမတ်တွေ ဂွမ်နိုင်ကြပါစီ <3 :*
References : popsugar, collegefashion
အိပျရာထ နောကျကလြညျး ဖကျရှငျကိုတော့ အလြှော့ပေးလို့မရဘူးလေ 😛
မနကျ ၈:၁၀ မိနဈ နှိုးစကျပေးထားရငျ ၈:၃၀ မှနိုးတဲ့ ယောငျးလေးတှေ လကျညှိုးထောငျ။ အဲဒီလို အိပျရာ နိုးတာနောကျကတြော့ ကိုယျ့ရဲ့အစီအစဉျတှေ အားလုံးက နောကျကခြွငျးမလှ နောကျကရြတောက ပုံမှနျ.. အရငျတုနျးက ကြောငျးဆိုတော့ နောကျကလြညျး မသကာအတနျးပကျြရုံလောကျပဲဆိုပမေဲ့ လုပျငနျးခှငျထဲမယျ နောကျကတြဲ့အခါ အဖွတျခံရတာနဲ့ ကိုယျ့တဈလစာလုံး ပွုတျပွုတျပွုနျးကုနျမှာက စိုးရသေး…
အိပျရာထ နောကျကရြပါတယျ ဆိုမှ အလှပွငျရတာနဲ့ ဖကျရှငျကိုကလညျး အလြှော့မပေးခငျြသေးတော့ တိုငျတှေ ပတျကုနျရတာလညျး နတေို့ငျးနီးပါးပါပဲရှနျ 😛 အထူးသဖွငျ့ အဝတျအစားလဲတဲ့အခြိနျ ဘာဝတျရမလဲလို့ ရှေးရတာက အလုပျတဈလုပျဆိုတော့ တကယျ့နောကျဆုံးဆိုတဲ့အခြိနျမှာ ဖကျရှငျကအြောငျ ဘယျလိုရှေးခယျြဝတျစားမလဲဆိုတာကို ပုံလေးတှနေဲ့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျရှငျ… အဲ့အတိုငျးတိတိကကြ ဝတျစရာမလိုဘူးနျော။ ဒီအတိုငျး မကျြလုံးထဲမွငျထားတော့ အရမျးကွီးရှေးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့..
သှားခါနီးလာခါနီး အဝတျအစားရှေးတော့မယျဆိုရငျ အဓိအရေးကွီးဆုံး အခကျြက အတှေးမလှနျဖို့ပါပဲ။ ကိုယျ့အဝတျအစားက အရမျးရိုးရှငျးလှနျးနရေငျလညျး တခွားဦးထုပျ၊ ခါးပတျ၊ လကျဝတျလကျစား စတာတှကေို ဖွညျ့ပွီးဝတျလို့ရတာမို့ အဝတျအစားကိုစဉျးစားတဲ့အခါမှာ ကိုယျနဲ့အလိုကျဖကျဆုံးကို ရှေးခယျြတတျဖို့ကပဲ အရေးကွီးဆုံးပါနျော။
(၁) အမညျးရောငျပွောငျရှပျ၊ အဆငျပါတဲ့ဒူးအောကျစကပျနဲ့ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျက တညျငွိမျပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အသှငျကိုဆောငျပေးပါတယျ။
(၂) တီရှပျအဖွူ၊ ဘောငျးဘီအမညျးရောငျ ကိုအောကျက စနီကာအဖွူလေးနဲ့တှဲဝတျရငျတော့ လူငယျဆနျပွီး ရိုးရှငျးတဲ့အသှငျကို ရရှိစမှောပါ။ (အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာတော့ အပျေါကဆှယျတာလေး တဈထပျထပျပေးပေါ့နျော။)
Related Article >>> အလှာအထပျဖကျရှငျ (Ruffles) တှကေ ၂၀၁၉ ရဲ့ဖကျရှငျပွယုဂျ ဖွဈလာမှာလား?
(၃) ရှပျတဈထညျကို ဂငျြးဘောငျးဘီနဲ့တှဲပွီး မွငျးမွီးဆံပငျလေး (Ponytail) စညျးလိုကျရငျလညျး ပေါ့ပါးလှတျလပျတဲ့ အသှငျကို ဖွဈစပေါတယျ။
(၄) ဘောငျးဘီဘာညာ မဝတျခငျြဘူးဆိုရငျတော့ တဈဆကျတညျးဂါဝနျကို အပျေါကဂငျြးကုတျလေးထပျပွီး အောကျမှာ ကွိုးသိုငျးခဲတံဒေါကျကလေးစီးလိုကျရငျတော့ အဇမျးတှေ ဂျေါနိုငျပွီပေါ့..
(၅) ဒါမှမဟုတျ ဘလောကျဈအင်ျကြီလေးကို စတိုငျဘောငျးဘီလေးထဲထညျ့ပွီး အောကျက ဖိနပျအပိတျကို အဆငျလေးနဲ့ တှဲဝတျရငျလညျး လှပါတယျ။
(၆) တီရှပျအမညျး၊ ဘောငျးဘီအမညျး တဈကိုယျလုံးအမညျးကို bomber jacket (မိုးကာသားနဲ့ဂကျြကတျ) နဲ့တှဲဝတျရငျလညျး စတိုငျကပြါသေးတယျ ယောငျးတို့ရေ…
(၇) အကှကျဒီဇိုငျးနဲ့ ဖလနျထညျကို ဂငျြးနဲ့တှဲဝတျပွီး ခါးပတျအညိုလေးနဲ့တှဲရငျလညျး လှပ။
(၈) အကယျ၍ ယောငျးဆီမှာ ဂါဝနျအရှညျကွီးဝတျထားတဲ့ အခါမြိုးဆို ဂါဝနျကို ဖိနပျခပျပါးပါးလေးနဲ့ တှဲပွီး ကောကျဝတျခသြှားလိုကျပါ။ လှငျ့လှငျ့လေးနဲ့ လှသှားပါလိမျ့မယျ။
(၉) ခညျြသားဂါဝနျလေးကို အောကျကစနီကာအဖွူနဲ့တှဲရငျလညျး ခဈြစရာအသှငျလေးကို ရရှိစမှောပါ။
အဆငျပွသှေားပွီလားယောငျးလေး? နှငျးကတော့ အလှယျတကာ့ အလှယျတှထေဲမှာမှ အလှယျဆုံးဆိုတဲ့ အိုငျဒီယာလေးတှကေို ရှေးထုတျပေးထားတာပါ။ ပွီးတော့ ဒီအဝတျလေးတှကေလညျး ယောငျးတို့ဆီမှာ တျောတျောမြားမြားရှိလောကျတာမို့ အထူးတလညျလညျး ရှာနစေရာမလိုတော့ဘူးလနေျော။ အိပျရာထနောကျကလြညျး ဖကျရှငျကကြနြဲ့ စမတျတှေ ဂှမျနိုငျကွပါစီ <3 :*
Tags: 5, Choice, Fashion, Last, Match, minutes, Style, tips, urgent
Hnin Ei Oo April 19, 2019